Cayaartoyda Jubbaland oo guul darro ku bilowday cayaaraha gobollada dalka + Sawirro | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Cayaartoyda Jubbaland oo guul darro ku bilowday cayaaraha gobollada dalka + Sawirro
Cayaartoyda Jubbaland oo guul darro ku bilowday cayaaraha gobollada dalka + Sawirro
Posted by: radio himilo July 16, 2016
Kulan cayaareed xiiso gaar ah xanbaarsanaa ayaa galabta garoonka Banaadir ku dhexmaray kooxo kala metelayay Hiiraan & Sh/dhexe oo dhan ah iyo Jubbaland, xilli garoonka ay joogeen kumanaan taageerayaal ah.
Labadan xul oo ku wada jira Group B ayaana midba uu doonayay inuu kan kale ka hormaro oo dhibcaha u horeeya ee Groupka hanto, iyagoo ogaa kooxdii badisaa in group B ay hogaamin doonto.
Xassan Yuusuf Macallin oo weerarka uga cayaarayay Hiiraan & Sh/dhexe ayaa hogaanka u dhiibay xulkiisa isagoo qeybtii koowaad bartamaheedii cayaarta ka dhigay 1-0.
Wiilasha Jubbaland ayaa qaab liita soo bandhigay qeybtii koowaad, taa ayaana dhaxal siisay in Maxamed Maxamuud Axmed oo lanbarka saddexaad xirta uu ka dhaliyay laad xor ah, iyadoo goolhayuhu awoodi waayay in darbadaas uu badbaadiyo.
Qeybtii koowaad ee cayaarta ayaana lagu kala maray 2-0 oo hogaanka ay ku hayeen wiilashii metelayay Hiiraan & Sh/dhexe.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ayayse wax walba isbedeleen oo xiddigihii Jubbaland ayaa la fahmi karay inay markan garoonka la qabsadeen oo cayaarta fahmeen, weeraro isdaba joog ah oo ay qaadeen ayaana siisay in Maxamed Maxamuud oo ahaa laacibkii goolka labaad ka dhaliyay uu gool iska dhaliyo, dheesha ayaana noqatay 2-1.
Isku xirnaantii Hiiraan & Sh/dhexe ayaa luntay, waxaana fuulay culeys iyagoo dhowr goor ka badbaaday in lasoo barbareeyo.
Kulan cayaareedkan ayaana waqtigii loogu talo galay kusoo dhamaaday 2-1 oo lagu sagootiyay wiilashii Jubbaland oo dadaadkoodii aan dhibic qura ka dhaxlin.
Next: Dhageyso: Barnaamijka Dhacdooyinka Dharaarta